geological - Synonyms of geological | Antonyms of geological | Definition of geological | Example of geological | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for geological
Top 30 analogous words or synonyms for geological
သတ္တုတူးဖော်ခြင်း သတ္တုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအရ တွေ့ရှိထားတဲ့မျက်မြင်ဘူမိဗေဒအချက်အလက်များ၊ နမူနာရလဒ်များနှင့် ဘူမိဗေဒယူဆချက်များပေါ် အခြေခံပြီး ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့ မြေအောက်မှာတွေ့ထားသော၊ သတ္တုရိုင်းသိုက်၏ ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတ္တုရိုင်းသိုက်ပမာဏကို ခန့် မှန်းတွက်ချက်ရာမှာ လက်တွေ့တူးယူနိုင်တယ်၊ မယူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုသလို လက်တွေ့တူးရင်လည်း ရှုံးမယ်/မြတ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုပါဘူး။ တချို့ကလည်း Geological လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဥမင် NATM- (New Austrian Tunneling Method) သည် ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၇ ခုနှစ်ကြား ကာလများတွင် ဩစတြီးယား နိုင်ငံ၌ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ယခင်ရှိပြီးဖြစ်သော ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း တူးဖော်မှု နည်းလမ်းနှင့် ကွဲပြားစေရန် ထိုအမည်ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် Salzburg မြို့၌ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို စတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သူများမှာ Ladislaus von Rabcewicz၊ Leopold Muller နှင့် Franz Pacher တို့ ဖြစ်ကြသည်။ NATM ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခု၏ ဘေးပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိသော ကျောက်သား (မြေလွှာ) တို့မှ သက်ရောက်လာမည့် Geological stress များကို ထိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ Stability အား ထိန်းသိမ်းရာတွင် ပြန်အသုံးချနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
အပိုလို ၁၁ They deployed the EASEP, which includedapassive seismograph andalaser ranging retroreflector. Then Armstrong loped about 120 metres (390 ft) from the LM to snap photos at the rim of Little West Crater while Aldrin collected two core tubes. He used the geological hammer to pound in the tubes - the only time the hammer was used on Apollo 11. The astronauts then collected rock samples using scoops and tongs on extension handles. Many of the surface activities took longer than expected, so they had to stop documenting sample collection halfway through the allotted 34 min.